VAKY BANTSILANA : Hoverezina amin’ny sehoseho ivelany… | NewsMada
VAKY BANTSILANA : Hoverezina amin’ny sehoseho ivelany…
Hanao ahoana ihany ny hoavin’ity firenena ity e! Manjavozavo sy tsy hita be ihany ny tena laharam-pahamehan’ny fitondrana foibe, manoloana ny fahasahiranam-bahoaka etsy sy eroa. Tsikaritra ho manamaimbo tena toy ny voatavo fiteren-dronono izy ireo, indrindra ny tsy fandraisana andraikitra mazava eto amin’ny tany sy ny firenena. Marobe ireo soatoavina sy fahaiza-miaina tsy mandeha amin’ny laoniny intsony. Efa tsy mifaka amin’ny lohany intsony angaha? Ny adidy, ny fanaovana ny marina, ny fanasoavana sy ny fitsinjovana ny soa iombonana ho an’ny firenena, zary hadino… fa natakalo ny sehoseho ivelany tsy hanala ny fahasahiranam-bahoaka marina.
Nahazo vahana ny sehoseho ivelany tamin’ny fandraisana vahiny isan-karazany, saingy tsy mbola nisitrahan’ny vahoaka ny vokatr’izy ireny. Ny vahiny no nahazo tamberina andraikitra, fa raha ny vahoaka aloha, manantena tsy misy no sarotra fa ny mamoy mora foana. Mitaky fankatoavan’ny vahiny mafy mihitsy ny mpitondra. Na ireo vahiny manao fitsidihana manokana aza, mbola itadiavana hevitra mafy mba isehosehoana…Rehefa zohina, tai-dronono mandroatra fotsiny ireo tompom-pahefana fa raha ny hitady vahaolana maharitra ho an’ny valalabemandry, tsy ho tafafoha sy ho tafarina mihitsy…
Raha mbola hanjaka ny kajikajim-politika tanterahin’ireo mpanao politika tavilahin-dresaka ireo, tsy ny fahoriam-bahoaka no hahamay azy ireo fa ny fanamafisana ny fitondrana. Sehoseho ivelany fotsiny ny ady amin’ny kere, ny ady amin’ny tsolotra, ny famotsiam-bola, ny fahalovana eny amin’ny fitsarana sy ny maro hafa. Ireo heverina fa vifanga amin’ny fahitan-kevitra hoenti-manatsara ny fiainam-bahoaka, nomena seza mihitsy, saingy nisafidy ny hanao karazana sehoseho ivelany koa. Mikoan’ny nahiny tahaka ny ranovola tra-maraina ny fitiavam-bahoaka azy ireo. Manakora tena toy ny vary ho ritra… Mitaky vahaolana matotra ny famerenan-kasina eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka. Anisan’izany ny tsy maintsy hirosoan’ireo mpisehatra rehetra amin’ny fifampidinihana hijerena ny tena tombontsoam-pirenena. Latsaka an-katerena ny firenena ka tsy tokony hirehareha ho mahazaka tokana an-tanàna ireo mpitondra. Misy hatrany ny singam-bolo mandavo ny vositra sy ny patsa iray tsy omby vava.
Ilàna ny fifanazavana sy fifampidinihina ny fiainam-pirenena fa tsy efan’olona irery io. Mitaky asa mivaingana ny valalabemandry fa tsy vitan’ny mandrimandry manan-draharaha eraky ny tanàna ny fiainam-bahoaka. Asa sy fampandrosoana miantraika hatrany ifotony no katsahina fa tsy raviravi-natentina. Ilàna ny fifanazavana sy fifampidinihina ny fiainam-pirenena fa tsy efan’olona irery io. Raha tsy vita izany, ho jamba mijery fitaratra eto ny raharaham-pirenena, ka mifampitsirika samy ratsy: ny iray mijery fa tsy mahita ary ny iray mahita fa tsy miteny…